Mhirizhonga Yoshoropodzwa Pamberi peSarudzo
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika pakati pemapato pamwe nemumapato inonzi yakashata chose
Vanhu vakawanda vanoti mhirizhonga iri kuitika muMDC-T mucherechedzo wekuti sarudzo dzegore rino dzinokwanisa kuita mhirizhonga yakawanda zvichipesana nechishuwo chemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, chekuti munyika muve nesarudzo dzakachena uye dzisina mhirizhonga.
Mhirizhonga mubato reMDC-T yakatanga zvakanyanya apo nhengo dzebato iri dzairadzika vaive mutungamiri webato iri, mushakabvu VaMorgan Tsvangirai, apo vechidiki vebato iri vaida kurova mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato iri, Muzvare Thokozani Khupe, pamwe nemunyori mukuru mubato iri, VaDouglas Mwonzora.
Vaviri ava vaipomera mhosva yekuramba zvido zvavo zvekuti VaNelson Chamisa vange vari ivo vakabata matomu mubato.
Kusawirirana mubato iri kwakazosvika pamhirizhonga apo vamwe vatsigiri vebato iri vakarohwa zvakaipisisa kuBulawayo neSvondo.
Asi mutauriri weMDC-T, VaObert Gutu, avo vanonzi vakambomiswa basa neNational Council, vanoti mhirizhonga yakatanga kare apo bato iri rakambotsemuka, asi vakarera imbwa nemukaka sezvo vasina kuishoropodza nekuigadzirisa.
Mumiriri weNorton muparamende, VaTemba Mliswa, vanoti zvemhirizhonga zviri kumapato ose kunyanya kana paine sarudzo.
Panyaya yekuti vamwe vezvematongerwo enyika vave kuita vechidiki vari kuvachengetedza, sezvakaonekwa kumusangano weMDC Alliance kuChinhoyi neSvondo, VaMliswa vanoti hapana chakaipa chero vasingazotori simba rebato kuve simba remapurisa kana masoja.
VaGutu vanoti nyaya yevechidiki vanoshandiswa kuchengetedza vakuru vakuru vemapato inofanirwa kurambidzwa sezvo zvichizokonzera kutanga kwemasoja asiri pamutemo sezvinoitika kune dzimwe nyika nyika dzakafanana neDemocratic Republic of Congo, uko kune zvikwata zvakaita se Banyamulenge.
Mukuru weZimbabwe Human Rights, ZIMRIGHTS, VaOkay Machisa, vanoti vanoshoropodza mhirizhonga munyika zvisineyi kuti ndiani ari kuiyita, asi vanoti zviri pachena kuti pane vave kukuchidzira kusawirirana mubato iri.
VaMachisa vashoropodzawo vakuru vemapato vanoramba kuti pane mhirizhonga munyika, vachitiwo havana kufara nemashoko aVaMnangagwa avo vakaramba kuti kwaive nemhirizhonga musarudzo dzemuna 2008, asi vanhu vakawanda vakafa zvinozivikanwa pasarudzo idzi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muChinhoyi, VaJohn Marava, vanoti zvinosuwisa kuti vezvematongerwo enyika vanoda kugadzirisa nyaya dzavo dzehutungamiri nechisimba.
VaMarava vanoti mhirizhonga inoitwa mumapato senzira yekunyaradza vose vanenge vachipikisana nezvinenge zvichida vakuru-vakuru.
MDC-T inoshoropodza mhirizhonga iri kuitika mubato rayo ichiti ichaferefeta zvakakwana nedonzvo rekuranga vose vari kukonzera mhirizhonga.
Kunyange hazvo MDC-T yakati iri kuferefeta nyaya idzi, hapana zvati zvaziviswa kubva pakaitika mhirizhonga kuBuhera.
NeChitatu, nhengo gumi nembiri dzeMDC-T dzakamiswa pamberi pedare muBulawayo mushure mekusungirwa mhirizhonga yakaitika neSvondo, iyo yakaona vanotsigira Muzvare Khupe vachirohwa zvakaipisisa.
Nhengo idzi dzakabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba.
Vakasungwa ava vanosanganisira sachigaro weMDC-T muBulawayo, uye vari mutevedzeri wameya weguta iri, VaGift Banda, avo vanonzi vari kutsigira VaNelson Chamisa.